Rikooo ရဲ့လေယာဉ်တင်ပြင်ဆင်မှု 3d v4 မကျင့်သောအကျင့်
မေးခွန်း Rikooo ရဲ့လေယာဉ်တင်ပြင်ဆင်မှု 3d v4 မကျင့်သောအကျင့်
2 နှစ်ပေါင်း 8 months ago #643 by brunoeduardo
ပြင်ဆင်မှု 3d v4 ၏ဗားရှင်းသစ်အချို့သတင်း?
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #663 by howlak
အဓိကခေါင်းစဉ်ကိုအားလုံး Rikoo တူ, တိကျမှုမဟုတျပါဘူး FSX လေယာဉ်တင်အလုပ်မလုပ်ကြပါဘူး .:
Rikoo အဆိုပါ addons ၏အဓိကဆော့ဖ်ဝဲရေးသူမဟုတ်ပါဘူး။ များသော FSX အတွက် Native လေယာဉ်တင်အလုပ် P3D မူရင်းသို့မဟုတ် Rikoo အားဖြင့် modded ဖြစ်စေ V4 ။ သို့သော် FS9 အလုပ်မဖြစ်ဘူးလေယာဉ်များ ported ။
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #667 by macca22au
ယောက်ျားတွေအလွန်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမ FSX သို့မဟုတ် FS2004 လေယာဉ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် P3Dv4 ။
အများဆုံး P3d v3 လေယာဉ် FMC နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးလေယာဉ်များအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး P3D4
၏ 64bit ဗိသုကာ P3D4 အချို့လေယာဉ်, ရှုခင်းစသည်တို့သဟဇာတဖြစ်ဖို့အချို့အပြောင်းအလဲလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ငါသည်သူတို့၏ Add-ons တွေကို update လုပ်ပေးခြင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒီမှာ downloads, များစွာ၏စာရေးဆရာများတိုက်တွန်းကြသည်။
2 နှစ်ပေါင်း2days ago #946 by DRCW
မပေးတောင်မှခရစ်တောင်မှအပေါငျးတို့သမရဲ့ထွက်နေသေးတယ်သူ V4 အတွက်အကျင့်ကိုကျင့်မလုပ်ပဲတစ်ဦးလေယာဉ်ပျံရဲ့လွှတ်ပေးရန်သည့်အခါမခဲ့ပါသည်။ သင်တို့သည်ဤ bug တွေထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရ, တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဘို့ခွင့်ပြုရပါမည်, ထိုနားလည်ခြင်း။ တချို့ကလေယာဉ်တစ်စင်းကိုအခြားသူများကိုမကျင့်စဉ်အခါ, ကရိုးရှင်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုကြောင်းအလုပ်လုပ်မပျက်ကျဖြစ်စေတဲ့နေကြသည်ကို uninstall လုပ်လိုက်။ အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း, ဖိုရမ်များဖတ်နှင့် bug တွေ fixed ရ, freeware သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရည်စူးသောသူတို့အဘို့စောင့်နေကြလော့။ အဲဒီချို့ယွင်းချက်အများစုဟာလှန်သောကုဒ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို၌ရှိကြ၏ P3D 32 ထံမှ 64 မှကိုက်။ အဆုံး၌အဲဒါကိုကောင်းကောင်းရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့ FSW beats ... ရှုခင်းဖိုင်တွေအားလုံးကိုအလုပ်ဟန် P3D v4 ။ ငါငါ့အလိုရှိသမျှဓာတ်ပုံကိုရှုခင်းကို download လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလေယာဉ်ပျံစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဖော်မြူလာအတွက် ပို. ပါဝင်ပတ်သက်နေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထက်ပိုပြီးချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏ရှုခင်းဖိုင်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။